नाग्रो टेक्नोलोजी: फसल प्राप्त गर्न र संरक्षण गर्ने प्रभावकारी विधिहरू - जर्नल "आलु प्रणाली"
के तपाईं स्वस्थ आलु बढ्न चाहनुहुन्छ, प्राप्त र एक उत्कृष्ट फसल राख्न चाहनुहुन्छ? विकासको सबै चरणहरूमा बिरुवाहरूलाई जटिल पोषण प्रदान गर्नुहोस् र राम्रोसँग निर्मित संरक्षण प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्।
स्वस्थ तरकारी फलाउनुहोस्
बिरुवाले आफ्नो पोषणको ७५-८०% माटोबाट प्राप्त गर्छ। एकै समयमा, यसको लागि पोषक तत्वहरूको उपलब्धता सीधै माटोमा सूक्ष्मजीवहरूको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ, तर रोपण सुरु गर्दा, माटोको तापमान प्रायः तिनीहरूको लागि धेरै कम हुन्छ।
तरकारी खेती गर्दा, अधिकांश किसानहरूले सुख्खा दानेदार खनिज मलहरू प्रयोग गर्छन्, जसको पाचन क्षमता र उपलब्धता 17 देखि 45% सम्म फरक हुन्छ। तर बिरुवाहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग नगर्न सक्छन्। सुख्खा मललाई काम गर्न नमी चाहिन्छ।
Humus ले तपाईंलाई नमी कायम राख्न र पोषक तत्वहरूको राम्रो आपूर्ति सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तर, हामीलाई थाहा छ, रूसका धेरै क्षेत्रहरूमा, विशाल माटोको क्षय लामो समयदेखि अवलोकन गरिएको छ: ह्युमस सामग्री घट्दै छ, माटो क्षरण र अन्तिम मौसमको अधीनमा छन्। खडेरी र आर्द्रताको कमीको अवस्थामा, बोटले सही मात्रामा आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राप्त गर्दैन, जसले बालीको मात्रा र गुणस्तरलाई नकारात्मक असर गर्छ।
तरल खाना किन सुख्खा खाना भन्दा राम्रो छ?
सुख्खा मललाई तरल मलमा परिणत गर्दा ठूलो फाइदा हुन्छ। बिरुवाको लागि पहुँचयोग्य र सुविधाजनक तरल फारमबाट मलहरूको अवशोषणको गुणांक 80% हो।
तरल खनिज फस्फोरस-पोटासियम पोषणले बोटलाई स्वस्थ जरा प्रणाली बनाउन अनुमति दिन्छ। यदि, बीउ रोप्ने चरणमा पनि, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमको पोषक मिश्रण प्रस्तुत गरियो भने, बिरुवाले तुरुन्तै र सूक्ष्मजीवहरूको सहभागिता बिना सन्तुलित आहार प्राप्त गर्नेछ, जसले यसलाई झारपातबाट सुरुआत दिनेछ र अवस्थाहरू सिर्जना गर्नेछ। उचित विकास।
वनस्पतिको प्रारम्भिक चरणमा जरा प्रणालीको गठन पछि, एक स्वस्थ बिरुवालाई "खुवाउन" आवश्यक छ - यसलाई नाइट्रोजन उर्वरक चाहिन्छ। तर राम्रो बाली बढ्न यो पर्याप्त छैन। बिरुवाको विकासको लागि प्रमुख बाधा माटोमा पोटासियम वा फस्फोरसको अपर्याप्तताको कारक हुन सक्छ। यो अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ जस अन्तर्गत खनिज पोषण व्यवस्थित रूपमा, सही चरणमा, सही फारममा, सही मात्रामा र निश्चित बालीहरूको लागि सधैं सन्तुलित रूपमा गरिन्छ।
प्रायः खेतहरूले नाइट्रोजन पोषणमा पूर्वाग्रहलाई अनुमति दिन्छ। नतिजाको रूपमा, बिरुवाको पानी खपत बढ्छ: हराइरहेको तत्वहरू प्राप्त गर्न र नाइट्रोजन आत्मसात गर्नको लागि यो आफैं मार्फत बढी नमी पम्प गर्न बाध्य हुन्छ। अकालमा वा अपर्याप्त माइक्रोलेमेन्टहरू खुवाउँदा अनुचित बिरुवाको विकास हुन्छ। स्क्युनेसले तरकारी पसलहरूमा बालीको सुरक्षालाई पनि असर गर्छ: प्राय: उत्पादनको अंश हराएको छ, मोल्ड र सडिएको उपस्थितिको लागि उर्वर वातावरण सिर्जना गरिन्छ।
NAGRO Group of Companies ले तरल जटिल बिरुवा पोषण को एक नवीन प्रविधि प्रदान गर्दछ, जसले मल को उपयोग को दक्षता को दुई देखि चार गुणा बढाउँछ। टेक्नोलोजीको प्रयोगले तपाईंलाई उत्कृष्ट नतिजा र योजनाबद्ध विशेषताहरूको साथ बाली उब्जाउन अनुमति दिन्छ। कम्पनीहरूको NAGRO समूहले व्यंजनहरूको धेरै समूहहरू विकास गरेको छ:
समूह १ - सुरुवाती लाइनअपहरू। तिनीहरूले भविष्यको फसलको लागि आधार बनाउँछन्।
समूह2- आधारभूत नाइट्रोजन पोषण। संरचनामा फस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, जस्ता, म्याग्नेसियम र अन्य पोषक तत्वहरू पनि समावेश छन्।
समूह3- पत्ते खुवाउने। खुवाउने पछि, कृषिविद्ले बिरुवाको विकासलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न सक्छ।
NAGRO टेक्नोलोजीले बिरुवाहरूको आंशिक जटिल पोषणलाई संकेत गर्दछ, त्यसैले हामी बिरुवाको विकासका चरणहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्र रोप्ने क्रममा मल प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्छौं। एप्लिकेसनलाई फङ्गिसाइडल र कीटनाशक उपचारको साथ पनि संयोजन गर्न सकिन्छ।
यदि बिरुवाको लागि खानाको आपूर्ति सिर्जना गरिएको छ भने, यसले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छ, जस्तै मानिसहरूले खानासँग फ्रिज प्रयोग गर्छन्।
तर यो फसल प्राप्त गर्न पर्याप्त छैन, यो झार, रोग र कीटहरु बाट रोपण जोगाउन आवश्यक छ। HSZR उपचारहरू अनुमोदित समयसीमा र नियमहरू अनुसार गरिनुपर्छ। तर "मानव कारक" को प्रभावलाई बहिष्कार गर्न गाह्रो छ, तथ्याङ्कका अनुसार, कृषि रसायनको ट्यांक मिश्रणको तयारीमा कर्मचारीहरूले गरेको गल्तीले मात्र 15-20% द्वारा खेती उत्पादनमा कमी ल्याउन सक्छ। औषधिको अत्यधिक खर्चले बिरुवालाई रोक्छ, यसको वृद्धि र विकासमा ढिलाइ गर्दछ। अपर्याप्त एकाग्रताले सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ।
यो समस्या समाधान गर्न, NAGRO समूह कम्पनीहरूले विशेष खुराक एकाइहरू विकास गरेको छ। सबै आवश्यक छ कि प्रणालीमा सही मिश्रण नुस्खा ड्राइभ गर्न र स्थापनामा CPP संग कन्टेनरहरू जडान गर्न। काम गर्ने समाधान ट्याङ्की वा स्प्रेयर भर्ने समयमा तयार हुन्छ: CPP लाई मुख्य पानीको लाइनमा सीधै डोज गरिन्छ। समय मा, सम्पूर्ण प्रक्रिया 5-7 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन।
NAGRO डोजिङ प्रणालीहरूको प्रयोगले ट्यांक मिश्रणको संरचनामा कृषिविद्लाई १००% विश्वास दिन्छ, त्रुटिको सम्भावनालाई हटाउँदै।
प्रणालीले रचनाहरूको परिवर्तनशीलताको लागि अनुमति दिन्छ। उदाहरणको रूपमा, एकअर्काबाट व्यापक रूपमा छुट्टिएका खेतहरूमा एउटै बाली उब्जाउने खेतलाई विचार गर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् कि दुबै क्षेत्रहरू विभिन्न कीटहरूबाट प्रभावित थिए, र तिनीहरूलाई तिनीहरूबाट जोगाउन, एउटै पदार्थको समाधानको साथ क्षेत्रहरूलाई उपचार गर्न आवश्यक छ, तर फरक अनुपातमा।
कार्यक्रमले सजिलैसँग कार्यसँग सामना गर्नेछ, औसत संरचनाको साथ अवस्था बाहेक, जसले इच्छित प्रभावको उपलब्धि सुनिश्चित गर्नेछ र घटकहरूको खपत कम गर्न मद्दत गर्नेछ। गम्भीर रकम जब यो सयौं हेक्टरमा आउँछ।
प्रणालीहरू क्रोपियो सफ्टवेयर, एग्रोसिग्नल र कृषि उद्यमहरूको लागि 1C ईआरपीसँग एकीकृत छन्। खेती उपकरणहरूमा लेखा र डाटा ट्रान्समिशन प्रणालीहरू स्थापना गर्न सम्भव छ कृषि रसायनहरूको नियन्त्रणमा रोसेलखोजनाडजोरको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, जसले कृषिविद्हरूलाई अर्ध-स्वचालित मोडमा रिपोर्टहरू उत्पन्न गर्न अनुमति दिनेछ।
साझेदारहरूसँग मिलेर, कम्पनीहरूको NAGRO समूहले तरल अर्गानो-खनिज पोषणको उत्पादन, रेसिपीहरू विकास गर्न र नयाँ प्राविधिक समाधानहरू विकास गर्न उपकरणहरू निरन्तर सुधार गर्दैछ।
हालका वर्षहरूमा, औद्योगिक परीक्षणहरू ठूला र साना फार्महरूमा (भोल्गा-सेलेक्ट र बायो-एग्रो (टाटारस्तान), रुसाग्रो ग्रुप अफ कम्पनीहरू, युनाइटेड कन्फेक्शनर्स, इत्यादिका उद्यमहरूमा सञ्चालन गरिएको छ, सञ्चालन अनुभव संकलन गरिएको छ। खनिज पोषक मिश्रण र बिरुवा संरक्षण उत्पादन को समाधान को तयारी को लागी 300 भन्दा बढी मिसिनहरु बेचिएको छ, आज उपकरण सफलतापूर्वक रूसी संघ र छिमेकी देशहरु को खेतहरु मा सञ्चालन छ।
उपकरणको छनोट संवादको प्रक्रियामा हुन्छ। हामी बिक्री मात्र गर्दैनौं, हामी एक नयाँ प्राविधिक अर्डर प्रस्ताव गर्दछौं जसले एक विशेष फार्मलाई न्यूनतम लगानीमा अधिकतम प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
कम्पनीहरूको NAGRO समूहको उपकरणहरूको जटिलले कृषिविद्लाई उपज, उत्पादनहरूको गुणस्तर सूचकहरू र तिनीहरूको शेल्फ जीवनलाई प्रभाव पार्न उत्कृष्ट उपकरण प्रदान गर्दछ। हामी अवस्थित कृषि उपकरणहरूको कुशल प्रयोग र ग्यारेन्टी वित्तीय परिणामहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
मस्को, Ryazanovskoe राजमार्ग, 16 बी
सबै प्रश्नहरूको लागि, कृपया +7 977 730 19 23, अलेक्जेंडर बट्राकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
टैग: जीके नगरोबिरुवाहरु को खुराकNAGRO प्रणालीहरू
बोत्सवानाले आयातका लागि प्रतिबन्धित तरकारीहरूको सूची विस्तार गर्दछ
मस्को क्षेत्रमा फसल कटाई जारी छ